Amaghị m ihe anyị ga-enwe ike ime na-enweghị mmekota n'elu ikpo okwu maka mmepụta ọdịnaya anyị. Ka anyị na-arụ ọrụ na infographics, akwụkwọ ọcha, na ọbụlagodi blog, usoro anyị na-esite n'aka ndị nyocha, ndị edemede, ndị na-emepụta ihe, ndị editọ na ndị ahịa anyị. Nke ahụ bụ nnọọ ọtụtụ ndị metụtara itinyefe faịlụ na azụ n'etiti Google Docs, DropBox ma ọ bụ email. Anyị chọrọ usoro na nsụgharị iji mee ka ọganihu na-aga n'ihu n'ọtụtụ ọrụ na-aga n'ihu.
Communication - @ kwuputara ndị otu ị chọrọ ka arụ ọrụ ma ha ga - ahụ ozi gị ozugbo na ebe ọrụ ha. I nwekwara ike ịgụnye ndị ọrụ si na mpụga ụlọ ọrụ gị.
Ngwa ngwa ngwa - Adaba nwere ma nwa afọ gam akporo na iOS Ngwa ka ị nwee ike ịdebe ma rụọ ọrụ ọbụlagodi mgbe ị na-anọ na tebụl gị.
Tags: bitiumBoxchromemmekorita ọdịnayammepụta ọdịnayaọrụ ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaọdịnaya ọdịnayaDropboxEvernotengwa ngwa googleowuwe ihe ubiHipchatokpokorodị egwuLinkedInahịaMicrosoft ExcelMicrosoft OneDriveMicrosoft ProjectoktaproofhqAkwụkwọ ngwa ngwandị ahịaSAMLslackSurveyMonkeyWordPressWrikewuoikeOnyebuchi